/ब्लग/ग्यालरी/कसरी पायिडिडोसाइन हाइड्रोक्लोराइड (भिटामिन B6) शरीर सौष्ठवहरूको लागि काम गर्दछ
प्रकाशित 11 / 18 / 2019 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
1. पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड के हो?
पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड वा भिटामिन B6 पानीमा घुलनशील भिटामिन हो जुन प्राय: खानाहरूमा पाइन्छ। यो मुख्यतया एक पूरक आहार को रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
जब एक पूरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, Pyridoxal हाइड्रोक्लोराइड उपचार वा धेरै चिकित्सा समस्याहरू रोक्न सक्छ। यो सामान्यतया इंजेक्शन द्वारा लिईन्छ, मौखिक वा खाना पूरकमा।
यदि तपाईं बॉडीबिल्डर हुनुहुन्छ भने, यो भिटामिन तपाईंको लागि उपयुक्त छ किनकि यसले शरीरमा थुप्रै लाभदायक कार्यहरू गर्छ। उदाहरण को लागी, यसले शरीरमा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, र अमीनो एसिडहरू बनाउन सहयोग गर्दछ जुन शरीरको अधिकतम प्रदर्शनको लागि आवश्यक हुन्छ।
खानामा पाइराइडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड भिटामिन बी of को सामान्य स्रोतहरूले अन्न, कुखुरा / टर्की, तरकारी र फलहरू समावेश गर्दछ।
2. बडिबिल्डर्सलाई किन भिटामिन आवश्यक छ - पायराइडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइड?
किन विटामिनहरू शरीर सौष्ठवहरूको लागि यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? एक दिनमा तपाईको सबै कामहरू तपाईले पूरा गर्न तपाईले आफ्नो शरीरलाई विभिन्न पौष्टिक पौष्टिक आहारमा खानुपर्दछ। यी कुनै पनि पौष्टिक तत्त्वहरूमा कमी हुनुले तपाईंको मेटाबोलिक मार्ग बिच्छेद गर्न सक्छ। यसले कम क्षमता र खराब प्रदर्शनको लागि नेतृत्व गर्दछ।
शरीर सौष्ठवकर्ताको रूपमा, तपाईंले आसीन जीवनशैलीको नेतृत्व लिनेहरूको तुलनामा पोषकहरू चाहिन्छ। B-6 पायराइडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड तपाईंको लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो मांसपेशी फास्फोरिलासको आवश्यकता हो, यो गतिविधि ग्लाइकोजेन मेटाबोलिज्मसँग जोडिएको। छोटकरीमा, तपाईलाई स्वस्थ मेटाबोलिजमको लागि भिटामिन बी6चाहिन्छ। भिटामिन बी ले एन्जाइमको कार्य बढाउँछ जुन प्रोटीनको विघटनमा भाग लिन्छ।
पाइरिडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइड प्रभावहरू शरीरमा प्रोटीन मेटाबोलिज्ममा यसको भूमिकासँग अधिक गर्नको लागि हुन्छ। यसैले यो प्रयोग गर्दा तपाईले जिममा हिर्काउनु अघि प्रोटिनको बिहानको खाजा उपभोग गर्न सल्लाह दिइन्छ। तपाईं आफ्नो पूर्व कसरतको बखत प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ लिन सक्नुहुन्छ, जब तपाईं प्रशिक्षण दिँदै हुनुहुन्छ, प्रशिक्षण पछि र ओछ्यानमा अवकाश लिनु अघि।
यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि तपाईं अन्य खाद्य पदार्थहरूलाई वेवास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईको शरीरलाई राम्रोसँग कार्य गर्न र रोगहरूबाट तपाईलाई बचाउन अन्य आवश्यक खनिजहरूको एक होस्ट आवश्यक पर्दछ।
3. फिटनेसमा भिटामिनको रूपमा पाइरिडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइडको प्रभाव के हो?
तपाईंले B6 को पर्याप्त मात्रा लिनु पर्ने कारण यो हो कि यसले धेरै रासायनिक प्रतिक्रियाहरूमा योगदान गर्दछ जुन एमिनो एसिड र प्रोटिनहरू समावेश गर्दछ।
एक बडी बिल्डरको रूपमा, तपाईंलाई तपाईंको रातो-सेल गठनको लागि अधिक आवश्यक छ। तपाईंले पानीको उत्सर्जन नियमन गर्न र तपाईंको शरीरलाई पर्याप्त अक्सिजन पायो भनेर सुनिश्चित गर्न तपाईंको रातो कक्षहरू अधिकतम पार्नु पर्छ।
अर्को कारण किन तपाईंलाई B6 चाहिन्छ यो हो कि यसले तपाईंको तनाव प्रतिरोधको स्तर सुधार गर्दछ। B6 तपाइँको खाना मा फलाम अधिक उपलब्ध हुन बनाउँछ। तपाईको मांसपेशीहरूलाई तनाव सहन अधिक फलाम र अधिक हेमोग्लोबिन (अक्सिजन) चाहिन्छ।
तपाइँलाई वर्कआउटको समयमा पनि धेरै ऊर्जा चाहिन्छ। पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइडले तपाईंको कोषहरूमा कार्बोहाइड्रेटहरू जलाउने दर बढाउँदै तपाईंको शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। यसले तपाईलाई पर्याप्त उर्जा प्राप्त गर्दछ।
प्रशिक्षणको क्रममा, तपाईंको शरीरको उर्जा उत्पादन प्रक्रियामा तनाव हुनेछ। त्यहाँ कडा गतिविधिहरु को परिणाम मा तपाइँको शरीर को ऊतकहरु मा पनि परिवर्तन हुनेछ। थप रूपमा, तपाईं मल, मूत्र, र पसीना बढेको मेटाबोलिजमको कारण पौष्टिक तत्वहरूको पर्याप्त मात्रामा हराउनुहुनेछ।
यी कारणहरूको लागि, तपाईंले आफ्नो शरीरको पोषक तत्वहरू पुनःभर्न आवश्यक छ। तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ पूरकहरू राख्नको लागि र तपाईंको टिशू मेस मर्मत गर्न। यसले तपाइँको टिश्युहरू दुबला र बलियो रहन सुनिश्चित गर्दछ। पिरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड भिटामिन B6 भन्दा राम्रो पूरक अरू कुनै छैन जब तपाईं आफ्नो शरीरको मांसपेशी जनको पुनःनिर्माण गर्न चाहानुहुन्छ।
4. पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडको इतिहास
पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड (65-22-5) पहिलो 1939 मा बनेको थियो तर यो 1934 मा पत्ता लागेको थियो। यो खोज ह Hungarian्गेरियन चिकित्सक पल ज्योर्गीले गरेका थिए। उनले यसलाई भिटामिन B6 को नाम दिए र यसलाई डर्मेटाइटिस एक्रोडाइनिया, चूहोंमा छालाको अवस्था निको पार्न प्रयोग गरे।
यसको खोजीको years बर्ष पछि, अर्को वैज्ञानिक, शमूएल लेपकोभस्कीले यसलाई प्राप्त गर्न चावलको भाँडोबाट छुट्याए पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड पाउडर.
१ 1939। In मा, फोकरहरू र ह्यारिसले पाइराइडोक्साइनको संरचना निर्धारण गरे। छ वर्ष पछि, स्नेलले देखाए कि B6 का दुई रूपहरू थिए: pyridoxamine र pyridoxal। पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड नाम यसको बारेमा आएको हो किनकि भिटामिन बी struct संरचनागत रूपमा पाइराइडिनको लागि समलिंगी थियो।
आज, विश्व स्वास्थ्य संगठनले पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडलाई उनीहरूको आवश्यक औषधिहरूको सूचीमा समावेश गर्दछ। यो किनभने तिनीहरू स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने सुरक्षित र सबै भन्दा प्रभावकारी औषधि मध्येको मानिन्छ। यो काउन्टरमा र सामान्य औषधिको रूपमा उपलब्ध छ।
5. शरीर सौष्ठवहरूको लागि पाइराइडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडको खुराक
बी-भिटामिनहरू मध्ये, पायरोडक्सल हाइड्रोक्लोराइड शरीर सौष्ठवहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुवैको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यो नयाँ कोशिकाको बृद्धिमा वर्णन गर्दछ पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड शरीर सौष्ठव क्षमता। B6 ले पोलेशियम र सोडियमलाई सन्तुलनमा राख्दछ, र न्यूक्लिक एसिड, डीएनए र आरएनए को निर्माणमा पनि सहयोग गर्दछ जुन यो पनि एक हिस्सा हो।
महिलाहरूले यसलाई हर्मोनहरूलाई सन्तुलनमा राख्न र गर्भावस्थामा प्रतिरोधक क्षमतामा सहयोग गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। यसले मासिक धर्मस्राव तरल पदार्थ प्रतिधारण लाई लड्दछ र मासिक दर्द र एक्नेलाई कम गर्दछ।
पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडको अभावले घबराहट, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, कमजोरी, स्फूर्ति पाएको जिब्रो, कडा न nailsहरू, जोर्नीशोथ र ओस्टियोपोरोसिस निम्त्याउँछ।
एफडीएको सिफारिश गरिएको खुराक 2mg हो, तर पूरकको साथ, सामान्य खुराक 20mg हो। जब तपाइँ 2000mg भन्दा बढि लिनुहुन्छ पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड विषाक्त हुन सक्छ।
यद्यपि एक अनुसन्धानका अनुसार अमेरिकी सरकारले हालका पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड सक्रिय व्यक्तिहरूको लागि सिफारिस गरेको पर्याप्त छैन।
यसको मतलब जसले खाद्य समूहहरूलाई सीमित गर्दछ वा क्यालोरीहरू प्रतिबन्ध गर्छन् उनीहरू अभावको जोखिममा भइरहेको हुन सक्छ। तसर्थ, तिनीहरूले pyridoxine हाइड्रोक्लोराइड प्रभावबाट फाइदा लिन सक्दैन यदि तिनीहरूले सरकारले सिफारिस गरे अनुसार मात्र खुराक लिन्छन्।
यस अनुसन्धानको नतीजाहरूको आधारमा, तपाईको स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
6. पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडको मेडिकल प्रयोगहरू
अमेरिकामा भिटामिन B6 को कुनै गम्भीर कमी छैन, तर वृद्ध र बच्चाहरूमा यो बढी सम्भावना हुन्छ। यदि तपाईं हाइपरथायरायडिज्म, सेलिआक रोग, ऑटोइम्यून रोग, किडनी रोग, वा तपाईं रक्सीमा निर्भर हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईं भिटामिन B6 को कमीबाट ग्रस्त हुने उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ।
शरीर भिटामिन B6 उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसैले तपाईं यो पूरक वा खाद्य पदार्थ बाट प्राप्त गर्नुपर्छ। पुरानो रोगहरूको रोकथाम गर्न र इष्टतम स्वास्थ्यको लागि पर्याप्त मात्रामा भिटामिनको उपभोग गर्नु आवश्यक छ।
यहाँ नौ विज्ञान समर्थित चिकित्सा पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड प्रयोगहरू छन्:
(1) डिप्रेसनका लक्षणहरूलाई कम गर्दछ र मुड सुधार गर्दछ
B-6 pyridoxine हाइड्रोक्लोराइड मुड्सलाई नियमित गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो किनभने यो neurotransmitters सिर्जना गर्छ भावनाहरु विनियमित। गर्भावस्थाको लागि पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड ती महिलाहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ जो भावनात्मक छन् वा गर्भावस्थाको समयमा हार्मोनल असंतुलनको कारण मुड स्विंग हुन्छन्।
B6 ले होमोसिस्टीनको रगतको स्तरलाई पनि कम गर्दछ, एक एमिनो एसिड जो मनोवैज्ञानिक समस्याहरू जस्तै उदासीनताको लागि जिम्मेवार छ। धेरै अध्ययनहरूले रगतमा पाइराइडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइडको कम स्तरको साथ अवसादग्रस्त लक्षणहरू सम्बन्धित छन्।
(2) अल्जाइमरको जोखिम कम गर्दछ र मस्तिष्क स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ
भिटामिन B6 मस्तिष्कको कार्य सुधार र अल्जाइमर रोगको रोकथाममा यसको भूमिकाका लागि परिचित छ। यसले रगतमा होमोसिस्टीनको स्तर कम गर्दछ जसले मेमोरी बिरामी र अल्जाइमरको जोखिम कम गर्दछ।
हल्का संज्ञानात्मक कमजोरी र उच्च रगत होमोजिस्टाइन स्तरको साथ १ 156 वयस्कहरूसँग गरिएको एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि उच्च पाइराइडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइड खुराक रगतमा होमोसिस्टेनको स्तर घटाउँछ र अल्जाइमरको जोखिममा परेका केही मस्तिष्कको अ the्कहरू पनि कम गर्दछ।
(3) एनीमिया रोक्छ र उपचार गर्दछ
भिटामिन B6 यसको कमीको कारणले एनीमिया रोक्छ र उपचार गर्दछ। यो किनभने यो हेमोग्लोबिन उत्पादन मा एक भूमिका खेल्छ। हीमोग्लोबिनले शरीरको कोशिकामा अक्सिजन प्रदान गर्दछ। कम स्तरको हीमोग्लोबिनको साथ, तपाईंको कोषहरू पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्दैन र यसको नतिजाको रूपमा, तपाईं रक्ताल्पता विकास गर्नुहुन्छ र थकित वा कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ।
भिटामिन B6 को कम स्तर एनीमियासँग जोडेको छ, विशेष गरी महिलामा जो बच्चा जन्माउने उमेरका छन् वा जो गर्भवती छन्।
(4) प्रीमेनस्ट्रुअल सिन्ड्रोम (PMS) को लक्षणहरू व्यवहार गर्दछ।
पायरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यो पीएमएसको लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ चिढचिढापन, डिप्रेसन, र चिन्ता सहित। अन्वेषकहरू विश्वास गर्दछन् कि भिटामिन बी these ले यी लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्दछ किनकि यसले न्युरोट्रान्समिटरहरू सिर्जना गर्दछ जुन मुड रेगुलेसनमा मद्दत गर्दछ।
एउटा सानो अध्ययनमा, यो पत्ता लाग्यो कि व्याकुल B200 प्रति दिन 50mg साथ 6mg मैग्नीशियमको साथ चिन्ता, चिडचिड, र मुड स्विंगहरू सहित PMS लक्षणहरू धेरै कम गर्न सकिन्छ।
(5) गर्भावस्था को दौरान मतली व्यवहार गर्दछ
धेरै दशकहरु देखि, भिटामिन B6 गर्भवती महिलाहरुमा मतली र बान्ता को उपचार को लागी प्रयोग गरीएको छ। यो डिगलिसको एक घटक पनि हो, बिहानको रोगको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि। यो महिलाहरु को लागी शीर्ष पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड फाइदाहरु हो जुन आफ्नो गर्भावस्थाको समयमा यस अवस्थाबाट ग्रस्त छ।
सही गर्भावस्था मा pyridoxine हाइड्रोक्लोराइड खुराक व्यक्ति बाट अर्को फरक हुन्छ। 342 30२ गर्भवती महिलाहरूसँग गरिएको एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि दैनिक खुराकको m० मिलीग्राम भिटामिनले उल्लेख्य रूपमा उपचार शुरू गरेको मात्र days दिन पछि उनीहरूको मतलीको भावना कम गरेको छ।
126 गर्भवती महिलालाई सम्बोधन गर्ने अर्को अध्ययनमा, मतली र बान्ताको एपिसोडहरू 75mg भिटामिन B6 दैनिक प्रयोग गरेर धेरै कम भयो। लक्षणहरू चार दिन पछि 41% ले कम गर्‍यो गर्भावस्थाको लागि पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइडको प्रभावकारिता देखाउँदै।
(6) अवरुद्ध धमनीहरूको रोकथाम गरेर मुटु रोगको जोखिम कम गर्दछ
पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइडले धमनीहरूको अवरोध रोक्न ठूलो भूमिका खेल्छ त्यसैले हृदय रोगको जोखिम कम गर्न। यदि तपाईंसँग भिटामिन बी low को स्तर कम छ भने, रगतमा भिटामिनको सामान्य स्तरको तुलनामा मुटुको रोग लाग्ने तपाईंको जोखिम लगभग दोब्बर हुनेछ। भिटामिन बी ले रगतमा होमोसिस्टीनको स्तर घटाएर धमनीहरू अवरोधहरूको सम्भावना कम गर्छ।
भिटामिन बीएक्सएनयूएमएक्सको कमी रहेको मुसा सम्बन्धी एक अध्ययनमा, उनीहरूले कोलेस्ट्रोलको उच्च स्तर रहेको पाए र उनीहरूले घावहरू पनि पाए भन्ने कुरा पत्ता लगायो। यिनीहरूले होमियोसिस्टीनको सम्पर्कमा परेमा धमनी अवरोधहरू हुने सम्भावना थियो। केहि अनुसन्धानले मानिसमा संलग्न पनि देखायो कि भिटामिन B6 हृदय रोगहरु लाई रोक्न सक्छ।
(7) क्यान्सर रोक्न मद्दत गर्दछ
यो सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो पायराइडोसाइन हाइड्रोक्लोराइड प्रयोगहरू दिइयो आज क्यान्सरको व्यापकता। यदि तपाईं पर्याप्त पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड पाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको क्यान्सरको केहि प्रकारहरूको विकासको जोखिम कम हुनेछ। यसको कारण अस्पष्ट छ तर अन्वेषकहरू यो विश्वास गर्दछन् कि यो B6 को क्षमतासँग सम्बन्धित छ सूजनसँग लड्न जुन कि क्यान्सर जस्ता दीर्घकालीन स्थितिको कारण गर्दछ।
12 अध्ययनहरू समीक्षा गरेपछि, केही अनुसन्धानकर्ताहरूले निष्कर्ष निकाले कि B6 को पर्याप्त रक्त स्तर कोलोरेक्टल क्यान्सर हुने कम जोखिमसँग सम्बन्धित छ। यदि तपाईंसँग B6 को उच्च स्तर छ, तपाईंको कोलोरेक्टल क्यान्सर हुने सम्भावनाहरू B50 को कम स्तरको तुलनामा 6% ले कम हुनेछ।
पाइरिडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइड स्तर र स्तनको क्यान्सर बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्न गरिएको केही अनुसन्धानमा, यो पत्ता लाग्यो कि रगतमा बी of को पर्याप्त मात्राले स्तन क्यान्सरको जोखिम कम गर्दछ, विशेष गरी पोस्टमेनोपसियल महिलाहरूमा।
(8) नेत्र रोगहरु लाई रोक्छ र आँखा स्वास्थ्य लाई बढावा दिन्छ
भिटामिन बी eye ले आँखाका रोगहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी बुढेसकालसँग सम्बन्धित - उमेरसँग सम्बन्धित म्याकुलर डिजेनेरेशन (एएमडी)। जब तपाइँको रगतमा होमोसिस्टीनको उच्च स्तर बगिरहेको छ, तपाइँलाई AMD विकासको उच्च जोखिम हुनेछ। पाइरिडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइडले रगतमा होमोसिस्टीनको माथिल्लो स्तर कम गर्न मद्दत गर्दछ त्यसैले AMD को जोखिम कम गर्दछ।
5,000 महिलाहरु भन्दा बढीमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, यो पत्ता लाग्यो कि भिटामिन B6 र फोलिक एसिडको साथ मिसाएर भिटामिन B12 को एक दैनिक खुराकले AMD को जोखिमलाई 40% सम्म घटाउँछ, भिटामिन लिनेहरूको तुलनामा।
अर्को अनुसन्धानले रगतको तल्लो स्तरमा आँखा समस्याहरूलाई जोड्यो; विशेष गरी नेत्र समस्या जो रेटिना संग जोडिएको नसहरूको अवरोध गर्न को लागी। पायरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइडको एक कम स्तर रेटिनाको विकारहरूसँग पनि सम्बन्धित छ।
(9) रुमाटोइड गठिया सूजन उपचार गर्दछ
यदि तपाईं रुमेटीयड गठिया सूजनबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, B6 लिनाले तपाईंको पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ। जोर्नीशोथले शरीरमा B6 को स्तर कम गर्दछ र यो स्तर सुधार गर्न आवश्यक छ।
एक्सएनयूएमएक्स वयस्कहरूमा गरिएको एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि दैनिक खुराक XXUMXmg को फोलिक एसिड र B43 को 5mg को संयोजनले 100 हप्ता पछि उनीहरूको शरीरमा भड़काउने अणुहरूको स्तरलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्‍यो।
7. पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड को साइड इफेक्ट
पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड बॉडीबिल्डर्स द्वारा प्रयोगको लागि सुरक्षित छ। यो चिकित्सा प्रयोगको लागि पनि सुरक्षित छ। जहाँसम्म, यसले फरक व्यक्तिमा फरक प्रभाव पार्छ केही pyridoxine हाइड्रोक्लोराइड साइड इफेक्ट समावेश:
सास फेर्न कठिनाई, पित्ती, तपाईको ओठ, अनुहार, घाँटी वा जिब्रोमा सुजन जस्ता एलर्जीको संकेतको संकेत
कम्पन, तापमान र स्पर्शको लागि सनसनी घटाइएको
तपाईको हातमा थकित वा बेइमान महसुस गरिरहेको छ
समन्वय वा सन्तुलन गुमाउने
हल्का सुन्न वा झुकाव, खुट्टा र हातहरूमा काँढ्ने वा जलनको
तपाईंको मुख वरिपरि वा खुट्टामा सुन्न
सूर्यको प्रकाशको लागि संवेदनशीलता
यदि तपाईले गम्भीर पाइराइडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइड साइड इफेक्ट अनुभव गर्नुभयो भने तपाईलाई चिकित्सा सल्लाह लिन राम्रो हुन्छ।
8. पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडका लागि चेतावनी र सावधानीहरू के हुन्?
पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडको धेरै उच्च खुराकले न्यूरोलॉजिकल डिसअर्डरहरू निम्त्याउन सक्छ। यी विकारहरू, बदले, स्थिरता समस्या र खुट्टा मा भावना गुमाउन सक्छ। त्यहाँ केहि रिपोर्टहरू छन् जुन उच्च खुराक पाइरिडोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड छाला प्रतिक्रिया गर्न सक्छ। भाग्यवस, जब तपाईं उच्च खुराक रोक्नुहुन्छ, तपाईं पूर्ण रूपमा निको हुनेछ।
गर्भावस्थामा औषधीको उच्च मात्रा नलिन सल्लाह दिइन्छ। एक योग्य डाक्टरले मात्र गर्भावस्थामा पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड खुराक निर्धारण गर्नु पर्छ। यो पनि नोट गर्नुहोस् कि तपाईं एक शरीर सौष्ठवकर्ता हो कि हैन, तपाईंले प्रति दिन 100mg pyridoxine हाइड्रोक्लोराइड लिनु हुँदैन जबसम्म तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहुन्न।
जब तपाईं पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड औषधिमा हुनुहुन्छ, तपाईं रोक्नुहुन्न, अर्को औषधिको साथ यसको प्रयोग शुरू गर्नुहोस्, वा तपाईंको स्वास्थ्य प्रदायकको स्वीकृति बिना खुराक परिवर्तन गर्नुहोस्।
जे होस् पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडसँग अन्य ड्रग्ससँग गम्भीर वा गम्भीर अन्तर्क्रियाको कुनै ज्ञात छैन, सावधान हुनु राम्रो हुन्छ।
B6 सँग जोडिएमा Cordarone (Amiodarone) ले सूर्यको प्रकाशप्रति संवेदनशीलता बढाउँदछ। यस संयोजनले तपाईंको छालाको पर्दाफाश क्षेत्रहरूमा रेशेस, छाला, वा घामले पोल्ने सम्भावना बढाउन सक्छ। यस संयोजन लिँदा सुरक्षात्मक कपडा वा सनब्लॉक लगाउन नबिर्सनुहोस्।
यसलाई हटाउनको लागि तपाइँको शरीरले लुमिनल (फेनोबर्बिटल) लाई तोड्दछ। पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड (65-22-5) ले यसको दर बढाउँदछ जुनमा Luminal बिग्रिन्छ र यसले तपाईंको शरीरमा यसको प्रभावकारितालाई घटाउँछ।
Luminal जस्तै, Pyridoxal हाइड्रोक्लोराइड (65-22-5) तपाईंको शरीरबाट यसलाई हटाउन यो रासायनिक विच्छेद गर्दछ। Dilantin र Pyridoxal हाइड्रोक्लोराइड को एक संयोजनको सेवन गर्नाले तपाईंको शरीरमा पहिलेको प्रभावकारिता कम हुनेछ। यसले तपाईंको केही दौडहरू अनुभव गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ।
अन्य औषधिहरू जुन पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ:
पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडको 70० भन्दा बढी बिभिन्न औषधिहरूको साथ हल्का अन्तरक्रिया छ। त्यसकारण, कुनै औषधि यसको साथ संयोजनमा प्रयोग गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
B6 अन्य B-भिटामिन MCT, CLA, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, म्याग्नेशियम, र भिटामिन सी को साथ राम्रोसँग काम गर्दछ।
शरीर-बिल्डर्सलाई पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइडको फाइदाहरू असंख्य छन्। केवल शरीर सौष्ठवहरू मात्र होइन, हरेक गम्भीर एथलीटहरूसँग यो भिटामिन स्टॉकमा हुनु आवश्यक छ। जे होस्, तपाईंले यसलाई चिकित्सा चिकित्सकहरूले सिफारिस गरेको खुराकको कडा पालनमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
बडीबिल्डि activitiesमा संलग्न कडा गतिविधिहरू शरीरको कोशिका र मांसपेशिहरूको पहिरनको लागि नेतृत्व गर्दछ। यो भिटामिन B6 सप्लीमेन्टहरूको प्रयोग गरेर बदल्न उत्तम हुन्छ। जब एक खरीद पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड उत्पादन, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई त्यस्तो सम्मानित स्रोतहरूबाट त्यसो गर्नुहुन्छ Aasraw। कानूनी प्याराइडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइड खरीद गर्नको लागि, आज aasraw.com मा जानुहोस् र अर्डर गर्नुहोस्।
1 Osswald, H, et al, 1987 सोडियम ascorbate, Menadione सोडियम bisulite वा pyridoxal हाइड्रोक्लोराइड को P388 ल्युकेमिया वा M 5076 सार्कोमा X- XXXXXXXXX XXXXX) मा विषाक्त र एन्टिनोप्लास्टिक क्रियामा प्रभाव PMID: 43
2 Reimer, LG, et al, 1983 भेडाको रगत अगर मा डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलोजी र संक्रामक रोग 1 (4) मा पौष्टिक रूप स्ट्रेप्टोकोसी र अन्य ब्याक्टेरियाको वृद्धिमा पाइराइडोक्सलको प्रभाव 273-5 PMID: 6667606
3 Zygmunt, WA, et al, 1962 REVERSAL OF D-CYCLOSERINE INHBITION BAATERIAL GROWTH by AANINE जर्नल अफ ब्याक्टेरियोलजी 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
कसरी Flibanserin एक महिलालाई सेक्स हार्मोनको रूपमा मद्दत गर्दछ	Synephrine HCL पाउडर - फ्याट बर्नर र वजन घटाउने पूरक